Wararka Maanta: Khamiis, Jan 24, 2013-Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo Baladweyne Tababbar uga furay Maleeshiyaad ku biiraya Ciidamada Dowladda
Tababarkan oo la filayo in uu socdo mudo 45 cisho ah ayaa ayaa ka furmay xerada ciidamadii hore ee xoogga dalka ee Lama-galaay oo qeyb ka mid ah ay hadda ku nool yihiin qoysas rayid laakiin lagu amray in ay mudo gaaban ku baneeyaan.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan C/fitaax Xasan Afrax ayaa sheegay in tababarka loo furay maleyshiyaadkani uu qeyb ka yahay dadaallada uu maamulkiisa ugu jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada dowladda ee gobolkaasi, islamarkaasina meesha looga saari lahaa in cid aan ka tirsanayn ciidamada dowladda ay hub ku dhex qaadato magaalada Baladweyn.
Sidoo kale taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobollka Hiiraan Cismaan Dubad Sugule oo isna arintaasi ka hadlay ayaa sheegay in uu tababarkani qeyb ka yahay qorshaha la doonayo in lagu dhiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo mudo dheer bur bursanaa, simarkaa looga maarmo ku tiirsanaanta awoodaha shisheeye.
“Dabcan waa tiradii ugu badneyd oo tababar looga furo Baladweyne, marka ay soo dhameystaan waxaa ay si toos ah uga mid noqon doonaan ciidamada dowladda ee maamulka gobollka Hiiraan,’’ ayuu yiri Col Cismaan Dubad.
Samatar Ducaale oo ah xiriiriyaha ciidamada Jabuuti ee howlgalka AMISOM ayaa sheegay in wixii hadda ka danbeeya aan lagu dhax arki karin magaalada qof qori ku dhax sita oo aan ka aheyn ciidamada maamulka dowladda ee gobollka Hiiraan.
“Hadda mudo todobaad ah ayaa maleeshiyaadka la soo ururinayaa oo la xareynayaa, wixii xiligaa ka danbeeya lama ogolaan doono in la arko qof qori sita oo isaga dhax lugeynaya magaalada,’’ ayuu yiri Samatar Ducaale.
Waxaa uu intaa ku darray Samatar in marka ay soo dhameystaan tababarka maleeshiyaadka hadda la xareynayo ka qeyb-qaadan doonaan sugida amniga magaalada iyo guud ahaan gobollka Hiiraan.
Saraakiisha ciidamada maamulka baladweyne iyo kuwa Jabuuti ayaa horay u tababaray maleeshiyaad ay soo ururiyeen odayaasha dhaqanka beelaha, kuwaasoo hadda qeyb weyn ka qaadanaya sugidda amniga magaalada Baladweyne.